सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
वीरगञ्ज, २९ मङ्सिर/ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र Human Resources Society Nepal (HRSN) को संयुक्त आयोजनामा ू"New Social Security Act 2074 and Rules 2075" विषयमा Knowledge Sharing कार्यक्रम आज सङ्घकै सभाकक्षमा सम्पन्न भयो ।
सङ्घका का.वा. अध्यक्ष गोपाल केडियाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उप–सचिव सुजन जोजिजुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । कार्यक्रममा HRSN का अध्यक्ष मोहन ओझा, श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण यादव, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव सुनिलकुमार खेतान, सचिव माधव राजपाल, HRSN का का.स.स. अनिल जयसवालको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा मानव संसाधन हेर्ने अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।